(Sawiro) Guddoomiyaha Gobolka Sanaag Iyo Suldaanka Guud Ee Beelaha Warsangeli Oo La Kulmay Guddiga Dhismaha Wadada Ceeldaahir Iyo Ceerigaabo | puntlandi.com
(Sawiro) Guddoomiyaha Gobolka Sanaag Iyo Suldaanka Guud Ee Beelaha Warsangeli Oo La Kulmay Guddiga Dhismaha Wadada Ceeldaahir Iyo Ceerigaabo
Kulan is waraysi ah oo u dhexeeyay xubno ka mid ah guddiga heer Puntland ee wadada Ceeldaahir–Ceergaabo iyo guddiga heer gobol ee isla wadada ayaa lagu qabtay qolka shirarka ee Suldaan Siciid Suldaan C/salaam ee magaalada Badhan.
Xubnaha labada guddi waxa ku weheliyey maamulka gobolka Sanaag iyo kan degmada Badhan.
Suldaan Siciid Suldaan Cabdi Salaan oo shirka furay ayaa ujeedka shirka ku tilmaamay is waraysi iyo sidii labada guddi uga wada shaqayn lahaayeen hirgelinta dhismaha wadada wejigeeda labaad oo u baahan dhaqaale badan.
Guddoomiye ku xigeenka Gudiga Sh. Cali Ceelaayo , Xaaji Cabdi Xundhur iyo Maxamuud Faarax bile ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta suldaanka , maamulka iyo waxgaradka gobolku u sameeyeen , sidoo kalena ka warbixiyey heerarkii ay soo martay dhismaha wadadu iyo iminka halka wwx marayaan iyo sida baahi loogu qabo daah furka wejiga labaad oo ah marxaladii Jayga iyo Daamurka.
Gudiga heer gobol ayaa soo dhoweyn iyo mahad celin kadib su’aalo ka weydiiyey shaqada socota iyo fikradaha la isaga kaashan karo dhaqaalaha wejiga labaad oo ah $2 Milyan dollar.
is waraysi dheer iyo falanqayn kadib , waxa lagu ballamay in la dar dar geliyo guddiga heer gobol iyo jaaliyadaha , si buuxdana looga wada shaqeeyo hirgelinta dhismaha wadada Ceeldaahir~Ceergaabo oo ahmiyad weyn u leh gobolka , waxana loo mahad celiyey cid kasta oo fikir ama dhaqaale ka geysatey wadada uuna ugu horreeyaan dadweynaha reer Puntland iyo Xukuumadda Madaxweyne Prof. C/weli Maxamed Cali Gaas , Suldaankuna duco iyo dar daaran kusoo gunaanaday.
Ugu Dambayntii Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud Ciyoon ayaa sheegay in Wadadu ay si habsami leh u socoto, isla markaana la gaari doono himilada shacabka ee ku aadan dhismaha Wadada.